Otú Ahụ́ Azụ̀ Pilot Whale Si Eme Onwe Ya Ka Ọ Dị Ọcha | È Kere Ya Eke?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bashkir Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Maya Mexican Sign Language Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Otú Ahụ́ Azụ̀ Pilot Whale Si Eme Onwe Ya Ka Ọ Dị Ọcha
E nwere ụmụ ihe ndị bi ná mmiri na-anyagide n’ahụ́ ụgbọ mmiri. Ha na-enye ndị na-akwọ ụgbọ mmiri ezigbo nsogbu. Otú a ihe ndị a si anyagide n’ụgbọ mmiri na-eme ka ụgbọ mmiri ghara ịna-agbasi ike, ya ana-aṅụkwu mmanụ ụgbọ mmiri. Ọ na-emekwa ka a na-ebupụta ụgbọ mmiri ná mmiri mgbe afọ ole na ole gachara iji wepụsia ihe ndị ahụ nyagidejuru na ya. Ndị sayensị na-achọ iji otú ihe ụfọdụ bi na mmiri si edowe onwe ha ọcha mụta otú ha ga-esi kwụsị nsogbu a.
Ihe i ga-echebara echiche: Nchọpụta ndị e mere na-egosi na ahụ́ otu ụdị azụ̀ a na-akpọ pilot whale nke ọdụ ya na-adị ogologo, nwere otú o si eme onwe ya ka ọ dị ọcha. O nwere ụmụ obere ihe ndị dị n’ahụ́ ya nwere ezé nke na-eme ka o siere ihe ndị na-anyado n’ahụ́ ụgbọ mmiri ike inyapara na ya. O nwere ihe dị ka mmanụ na-eju n’agbata oghere ndị dị n’ezé ndị ahụ dị n’ahụ́ ya. Ọ na-ejikwa ya achụ ụmụ ahụhụ ma ọ bụ nje ndị dị ná mmiri ndị ga-achọ inyagide n’ahụ́ ya. Ka oge na-aga, ahụ́ azụ̀ a na-ekpepụ, ya erute nke ọhụrụ. Azụ̀ a na-emepụtazi mmanụ ọhụrụ ga-etechi ahụ́ ya niile.
Ndị sayensị na-achọ ilere anya n’otú a azụ̀ pilot whale si edebe onwe ya ọcha, rụọ ihe ga-eme ka ahụ́ ụgbọ mmiri na-adị ọcha. N’oge ndị gara aga, ha na-ete ụgbọ mmiri ágbá ndị ga-eme ka ihe ghara ịna-anyado na ya. Ma, n’oge na-adịbeghị anya, a machibidoro ndị mmadụ ite ụdị ágbá a n’ahụ́ ụgbọ mmiri n’ihi na ọ na-egbusi ihe ndị bi na mmiri. Ndị na-eme nchọpụta kwuru na ihe a ga-eme bụ iwere obere ígwè a kpara akpa machie ahụ́ ụgbọ mmiri ahụ, ma ebe e nwere oghere n’ahụ́ ụgbọ mmiri ahụ bụ́ ebe kemikal na-agaghị egbu ihe dị na mmiri ga-esi na-agbapụta. Kemikal ahụ mesa ná mmiri, ya akpụkọọ n’ahụ́ ụgbọ ahụ niile. Ka oge na-aga, ya ekpekapụ, daba ná mmiri. Ihe ọ bụla nyagidere n’ụgbọ ahụ ga-esokwa ya dapụ. Kemikal ọzọ na-esikwa n’oghere ndị ahụ gbapụta machiekwa ahụ́ ụgbọ ahụ niile.
Ụmụ ihe ndị bi ná mmiri na-anyagide n’ụgbọ mmiri na-eme ka ọ ghara ịna-agbasi ike, ọ na-esikwa ike iwepụ ha
Nchọpụta ndị e mere gosiri na ihe ndị a a na-arụnye n’ụgbọ mmiri nwere ike ime ka otú ụmụ ihe ndị bi na mmiri si anyagide n’ụgbọ mmiri belata. Ihe ọhụrụ a ga-abara ụlọ ọrụ ndị nwere ụgbọ mmiri ezigbo uru, n’ihi na ọ na-efu nnukwu ego iji bupụta ụgbọ mmiri n’elu ala ma mee ka ọ dị ọcha.
Gịnị ka i chere? Otú a azụ̀ pilot whale si eme ahụ́ ya ka ọ dị ọcha, ọ̀ nọkatara dịrị? Ka, è kere ya eke?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú Ahụ́ Azụ̀ Pilot Whale Si Eme Onwe Ya Ka Ọ Dị Ọcha
ijwwd isiokwu 4